Isizinda seTorrentz2.eu Simisiwe - Ezinye izindlela ezihamba phambili (2020) - Uhlu
Izifufula ziya ngokuya zanda kulezi zinsuku. Abantu abaningi bayakujabulela ukulanda okuqukethwe mahhala. I-Torrentz2.eu ibingenye yamawebhusayithi e-intanethi adumile kakhulu walokho okulandiwe. Abasebenzisi bakwazi ukusesha izigidi zezinhlelo zokusebenza ezisebenzayo, ama-movie, nezinhlelo ze-TV. Amathuba awapheli ngaleli banga lokuhlanganyela kontanga. Noma ngubani angalayisha ifayela nge-inthanethi futhi alabe nomhlaba.
Ukuxhuma kwe-P2P sekuba yinto evamile yowezi-2020. ITorrentz2.eu ayisekho, futhi iqiniso elibuhlungu lelo. Kulo mhlahlandlela, sizobheka ezinye zezindlela ezingcono kakhulu ezitholakalayo. Ungashutha kalula usebenzisa lo mhlahlandlela.
Izindawo Zamahhala Zokusakazwa Kwama-Movie - Watch Online
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeTorrentz2.eu:
Kulesi sigaba, sizoxoxa ngezindlela ezingcono kakhulu ezingatholakala kwiwebhusayithi yesifufula ephelele. Kunezinketho eziningi ezitholakalayo, kepha kufanele usebenzise ubuqili. Kube nokuqubuka okwandayo kumawebhusayithi anjalo. Abantu abaningi banamathele ngaphandle kwewebhusayithi yesifufula ejwayelekile. Nakhu ukukhetha okuphezulu, okuzokwenza impilo yakho ibe lula. Kufanele ufinyelele kuwo wonke amawebhusayithi ashiwo lapha ngokuqapha.
Ingenye yamawebhusayithi amadala kakhulu asesifufula ku-intanethi. Bake babona i-fiasco enkulu nakwezedlule.Iwebhusayithi yehlisiwe ngenxa yemithetho elwa nobugebengu emhlabeni. Abathuthukisi abaningi babonile namacala obugebengu. Ezikhathini zamuva nje sekuqala ukubuya. I-inthanethi iyindawo enkulu, futhi ukungaziwa kuyimali. Ungathola imibukiso emihle kakhulu, imidlalo, isoftware, nama-movie lapha.
Kunokuqukethwe okuningi kwe-premium okutholakala lapha mahhala.Ungavakashela isayithi kusuka kuzixhumanisi eziningi zommeleli ku-intanethi. Isizinda sokuqala asisasebenzi. Abathuthukisi bagcine izindlu eziningi ezingemuva zabasebenzisi ukuze basebenzise amasevisi abo.
2. Izifufula zokukhahlela
Izifufula zeKickass nazo ziyigama elidumile embonini. Ababukeli abaningi kungenzeka ukuthi sebevele bazi ngezinsizakalo zabo. Inamandla amakhulu futhi ibona izigidi zabasebenzisi nsuku zonke. Ipulatifomu iyisihlanganisi esikhulu sesifufula. Abasebenzisi abaningi bazama le nkundla ukuze babelane ngokulayishiwe kwabo nomhlaba. Umphakathi osesithangamini uqinile. Abasebenzisi bangathola cishe yonke into kusayithi. Ungacela futhi imifudlana embalwa kubafaki abajwayelekile. Yindawo engcono kakhulu yabadlali bamageyimu ukuzama iziqu ze-AAA.
Izikhukhula zeKickass zaba yindawo yokuqala yokukhipha isikhukhula seGTA V PC, Fifa 19, nezinye eziningi. Ungalanda amafayela we-.torrent noma usebenzise izixhumanisi zamagnet ukuqala ukusebenzisa ipulatifomu.
I-YTS noma i-Yify iyiwebhusayithi yesifufula edumile esiza ukulanda ama-movie. Icaciselwe ama-movie wakamuva we-HD. Noma ngubani ofuna ukubuka amaflick akamuva kufanele azame le nkundla. Kade sisebenzisa le sevisi isikhathi eside manje. I-YTS idume kakhulu ngenxa yezikhathi zayo zokulayisha ezisheshayo. Bajwayele ukukhipha ama-movie ezinyangeni ezimbalwa zokukhishwa. Ungathola ikhwalithi ye-High Definition endaweni yesikhulumi.
Ukuthandwa kwamawebhusayithi wesifufula sewebhu nakho kukhulu. Manje usungasakaza ngempumelelo ngejubane eliphezulu. Banemibukiso yakamuva nemidala kunayo yonke etholakalayo ukulanda kalula. Abasebenzisi bangabheka umtapo wezincwadi omkhulu ngebhokisi labo lokusesha. Ilungele izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme, ezikusiza ukuphuma kuma-movie.
I-RARBG iyipulatifomu enhle kakhulu yabasebenzisi abafuna ukuthola ukulandwa kwakamuva. Yipulatifomu enkulu enezinkulungwane zezifufula. Iwebhusayithi ine-interface yomsebenzisi elula efinyeleleka kalula. Usebenzisa le sevisi, ungenza kalula ukulandwa kwejubane elikhulu. Intanga yokwabelana kontanga iya ngokuya ithandwa kulezi zinsuku. Kukhona amathani wesoftware, ama-movie, nemidlalo etholakalayo lapha.
Kwakungenye yamawebhusayithi okuqala wesifufula ukusebenzela izigidi zababukeli. Abantu abaningi abakwazanga ukusebenzisa ipulatifomu phambilini. Kwakunecala elifana ne- torrentz2.eu neRARBG futhi. Iwebhusayithi ibone ukwanda kweziguli kuwebhusayithi yazo. Yehliswa ngokushesha ngemuva kwezinsolo ezinjalo. Usengayifinyelela ngosizo lwezibuko nezixhumanisi zommeleli.
Iwebhusayithi ilungele abasebenzisi abathanda ukusesha nokulanda izinhlelo zakamuva ze-TV nama-movie. Ithuluzi elikhulu le-torrent aggregator. Ukuqhekeka kwesifufula kwabona le webhusayithi icishe ingasasebenzi.
Umphakathi usanda kuvusa inkundla. Abasebenzisi manje bangakwazi ukuyifinyelela kalula futhi kalula. Kukhona izixhumanisi eziningi zommeleli ezitholakala ku-inthanethi ukuze uzame le sevisi. I-interface yomsebenzisi iyamangalisa futhi isebenzisa ukwakheka okuhle kakhulu ukufinyelela kalula. Kukhona umphakathi omkhulu womtapo wezincwadi ongawuhlola. Ungangena kuzinsizakalo ezahlukahlukene ngezinhlobo eziningi. Kuza nemininingwane eminingi yokuphequlula kusayithi.
Ungayithola kanjani iTorrentz2.eu?
Abasebenzisi abaningi bangafinyelela kwiwebhusayithi ye-torrentz2.eu besebenzisa izixhumanisi zommeleli futhi. Kulesi sigaba, sizokukhombisa izindlela zommeleli zokusebenzisa iwebhusayithi. Kunezixhumanisi eziningi zesibuko ku-inthanethi ongazama ngazo. Omunye wemiphumela ephezulu yokusesha ikunikeza esinye isixhumanisi saleyo platform. Abasebenzisi bangavakashela labo bese baqala ukulanda besebenzisa izixhumanisi zikazibuthe.
Kuzokusa kusixhumanisi esihlukile se-torrentz2.eu. I-interface yomsebenzisi nezinyathelo zokufinyelela ziyafana. Zama le sevisi ngokuzibeka wena engcupheni.
Izeluleko Zokuhamba Ngokuphepha:
Onke amawebhusayithi nezinye izindlela ezitholakalayo lapha zisebenzisa izinsizakalo zommeleli. Kuzoba lusizo uma uthatha isikhathi esithile ukudlula kulezi zeluleko. Nalu ulwazi okufanele ulubheke njengamanje.
1. Sebenzisa i-VPN
I-VPN amasevisi ajwayelekile kulezi zinsuku, futhi ungagcina kalula ubukhona bakho ku-inthanethi. Ilungele ukufihla ikheli lakho le-IP. Ohulumeni bamazwe ahlukahlukene bakulandela ngenkuthalo ukusetshenziswa kwe-intanethi. Izifufula nobugebengu baba izihloko ezibucayi ngokuya. Sincoma abafundi bethu ukuthi bazame izinsizakalo ezinjengeNordVPN, okukuvikela kulezi zinkinga. Yonke idatha yakho izohlala iphephe ngokuphelele.
2. Amawebhusayithi angama-proxy
Kunamathani ama-proxy futhi avulele amawebhusayithi ku-intanethi. Ungathola izixhumanisi ezisebenza kwisiza sakho sesifufula osithandayo ngosesho olulula lwe-google. Sebenzisa le nkulumo yokusesha ukuthola insizakalo esheshayo. Izokusiza ukuthi uthuthele ngokushesha imibukiso emihle kakhulu, imidlalo, nesoftware. Besilokhu sisebenzisa lokhu kukho konke ukulandwa kwethu futhi. Kuphephile ukusho ukuthi izifunda eziningi zinezinkinga eziphezulu ngobugebengu. Zama ukuhlala uvikelekile ngenkathi usebenzisa lezi zinsizakalo.
Lapha ungathola izixhumanisi zakamuva zepulatifomu yakho oyithandayo.
ITorrentz2.eu iyipulatifomu ethandwayo enamandla amakhulu. Impilo yayo yanqanyulwa ngenxa yokwanda kwamaphoyisa ezikhukhula. Imithetho ye-copyright ibone ukuthi isizinda simisiwe. Kulo mhlahlandlela, sikhombisa ezinye izindlela ezihamba phambili. Zama lokhu namuhla.
inkathazo yethangi 3 ivuliwe esikoleni
enza ama-bluestacks esebenza ku-mac
bukela ama-movie mahhala ku-inthanethi
bukela ukusakazwa kwamahhala kwe-movie online akukho ukubhalisa
amasayithi afana nokuthi ngingakusakaza